Somalia oo digniin u jeedisay Kenya iyo Djibouti | Berberanews.com
Home WARARKA Somalia oo digniin u jeedisay Kenya iyo Djibouti
Somalia oo digniin u jeedisay Kenya iyo Djibouti
MUQDISHO —(Berberanews)-Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diginin u jeedisay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ay ku eedeysay inay isku dayayaan “inay farageliyaan” go’aamada ka soo baxaya Midowga Afrika ee quseey Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ka hadlay taleefishinka dowladda ayaa yidhi “Dowladda federaalka waxay ka digaysaa xogo hordhac ah oo xaqiijinaya in dowladaha Kenya iyo Jabuuti ay ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed xubnaha Guddiga Amniga iyo Nabad-galyada Midowga Afrika, kaasi oo ay kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qoddobo ay rabaan in lagu daro qoraalka la doonayo in uu soo saaro guddiga.”
“Urrurada aan xubinta ka nahay, Diblomaasiyiinta Shiyeeshe iyo Saaxiibada kale ee diblomaasiyadda Soomaaliya kala dhexeyso, waxaan si cad ugu sheegeynaa in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu yahay hay’adda ugu sarreyso ee sharci dejinta dalka, xeerarka ka soo baxana ay yihin go’aanka ugu dambeeya ee Qeenuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xukuumaddana ay tahay hay’adda fulisa xeerarkaas Dastuuriga ah” ayuu yidhi Dubbe.
Somalia oi digniin u jeedisay Kenya iyo Djibouti
MUQDISHO —(Berberanees)-Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diginin u jeedisay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ay ku eedeysay inay isku dayayaan “inay farageliyaan” go’aamada ka soo baxaya Midowga Afrika ee quseey Soomaaliya.
“Urrurada aan xubinta ka nahay, Diblomaasiyiinta Shiyeeshe iyo Saaxiibada kale ee diblomaasiyadda Soomaaliya kala dhexeyso, waxaan si cad ugu sheegeynaa in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu yahay hay’adda ugu sarreyso ee sharci dejinta dalka, xeerarka ka soo baxana ay yihin go’aanka ugu dambeeya ee Qeenuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,9 Xukuumaddana ay tahay hay’adda fulisa xeerarkaas Dastuuriga ah” ayuu yidhi Dubbe.
Previous articleMidowga Afrika oo ka hor yimi muddo kordhinta dowladda Farmaajo
Next articleLix hoggaamiye Afrikaan ah oo xilka ka dhaxlay aabbeyaashood